अब विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिन नपाइने ! - Everest Dainik - News from Nepal
अब विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिन नपाइने !
एजेन्सी । भारतमा अब कक्षा १ र २ का विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिन नपाइने भएको छ ।
भारतको मानव संसाधन मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको निर्देशिकामा यस्तो उल्लेख गरिएको छ ।
भारतको सरकारले प्रत्येक कक्षाका विद्यार्थीलाई स्कुल जाँदा बोक्ने झोलाको अधिकतम तौलको सीमा पनि तोकिदिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस हात्तीसँग सेल्फी सौखले निम्त्याएको मृत्यु
ट्याग्स: Homework, India